कुशे अौंशीको शास्त्रीय महत्त्व विषयमा –प्रा.डा. देवमणि भट्टराई Devmani Bhattarai - Suvham News
कुशे अौंशीको शास्त्रीय महत्त्व विषयमा –प्रा.डा. देवमणि भट्टराई Devmani Bhattarai
August 22, 2017 by gsmktm
घरनजिकै कुश रोप्ने बारी नै छुट्याइएको हुन्छ। पानी जम्ने ठाउँमा कुश नफस्टाउने हुनाले भिरालो जग्गामा कुश रोपिन्छ। रोपेको कुशलाई कुशे औंसीको दिन भूमि एवं कुशको पूजा गरी धूपबत्ती गरेर क्षमा समेत मागी कुश उखेल्नुपर्छ। भाद्र कुष्ण औंसीमा कुश संग्रह गरिने भएकाले यसलाई कुशोत्पाटिनी अमावाश्या भनिन्छ। यसै दिन वर्षदिनलाई आवश्यक कुश संग्रह गरिन्छ। यद्यपि सम्भव भए दैनिक पूजामा फूल टिपेसरह नै प्रत्येक दिन कुशको संग्रह गर्न पनि सकिन्छ। तर त्यो सधैं सम्भव नहुने भएकाले कुशे औंसीमै कुश उखेलेर राख्नुपर्छ। कुशे औंसीमा उखेलिएको कुश वर्षदिनसम्म पवित्र रहने हुँदा वर्षभरि चलाउन मिल्छ भनिएकोछ। तर सोमबारे औंसी परेका दिन उखेलेको कुश चाहिँ १२ वर्षसम्मै चलाउन हुन्छ भन्ने जनश्रुति पनि पाइन्छ। यस प्रकारको कुश संग्रहको विधिमा कुश रोपेको बारीमा बिहान गएर पूर्व वा उत्तर फर्किएर यो मन्त्र उच्चारण गरी कुशको प्रार्थना गर्नुपर्छ—
…व्रतराजमिदं राजन् विष्णोः प्रीतिकरं परम्।।ॐॐॐ
Prevई‍ पी एस प्रणाली मार्फत दक्षिण कोरिया गएका ३६९ जना लाई विमाको रकम लिन कम्पनिको सम्पर्कमा आउन भन्यको छ। नामावलि सहित
Nextअधिराजकुमार हृदयन्द्र वीर बिक्रम शाह तराईमा बाढि पिडितलाई राहत वितरण गर्दै